DAAWO: Maxkamadda Sare oo Kiiskii Caasho Ilyaas mar kale kudhawaaqday.
GAROOWE(P-TIMES) – Maxkamadda Sare ee Puntland ayaa ku dhawaaqday in markale ay dib u dhigtay xukunka ragga loo haysto in ay ka dambeeyeen dilkii loo geystay Caasho Ilyaas Aden oo ahayd gabar 13 sanno jir ah oo lagu dilay magaalada Gaalkacyo.
Maxkamadda ayaa maanta mar kale dhageystay dacwadaha ay kala qabaan labada dhinac, gaar ahaana Qareenada difaacaya kuwa horey dambiga loogu helay qaarkoodna qirtay iyo Xeer Ilaalinta dawladda Puntland.
Garsooraha Maxkamadda Sare ayaa sheegay in ay 22-ka bishan markale dib u dhageysan doonaan kiiska Allaha u raxmadee Caasho Ilyaas Aden, isagoo sheegay in ay maanta iyo maalintii horeba dhageysi sameeyeen.
XOG+WARBIXIN: Madaxda Puntland maxay isku qabteen oo hore, Maxaase hadda Khilaafka banaanka u saaray?
Maxkamadda horteeda ayay 17-ka bishan ka qirteen raggan qaar kamid ah eedaha loo haysto oo ay ku jiraan Kufsi, Afduub iyo waliba dil, taas oo ka dhigan in xukunka uu kasoo dhawaaday halkii hore